कोरोनाबाट विदेशमा थप ३ जना नेपालीको निधन - नेपालबहस
आइतबार , फागुण १६, २०७७
गृहपृष्ठ › प्रवास
कोरोनाबाट विदेशमा थप ३ जना नेपालीको निधन
| १६:३२:५९ मा प्रकाशित
२५ माघ, लण्डन । कोरोना भाइरस ‘कोभिड-१९’को संक्रमणबाट विदेशमा थप ३ जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली ‘संघ’का अनुसार यो साता युकेमा २ जना र अल्जेरिया १ जना को संक्रमणका कारण निधन भएको हो । यो सहित २१ देशमा कोरोना संक्रमणका कारण निधन हुने नेपालीको संख्या ३ सय ३३ जना पुगेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक सन्जिव सापकोटाका अनुसार शनिवार साँझसम्म विभिन्न ५० देशमा रहेका ५८ हजार ८ सय ३२ जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ती मध्ये ५६ हजार २ सय ४७ जना कोरोना मुक्त भएका छन । यो कुल संक्रमितको ९४ प्रतिशत हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता बेलायत, मलेसिया, साउदी अरब, पोर्चुगल र नाइजेरियामा रहेका थप नेपालीहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यस्तै कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा २ हजार ३५ जनाको निधन भएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या २ लाख ७१ हजार ८ सय ६ जना छ भने २ लाख ६६ हजार ८ सय १२ जना अर्थात ९८ दशमलव ५ प्रतिशत कोरोनाबाट मुक्त भएका छन् ।
खोप कसले लगाउने कसले नलगाउने ?
१८ वर्ष माथिका सबैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सकिन्छ । मुटु रोग मधुमेह र अन्य दीर्घ रोगका बिरामीले पनि जीवनरक्षाका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन सकिन्छ । खोपको पहिलो मात्राले असर र एलर्जी भयो भने पनि अर्को डोज लगाउनुहुँदैन ।
ज्वरो आएको बेला, रक्तश्रावसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्ति, रगत पातलो बनाउने औषधि सेवन गर्ने व्यक्ति, गर्भवती हुन इच्छुक महिला, गर्भवती, सुत्केरी, स्तनपान गराइरहेकी महिला, गम्भीर कोरोना संक्रमित, सिकिस्त बिरामी लगायतले पनि यो खोप नलगाउन उत्पादक कम्पनीले सुझाएका छन् । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका लाई पनि खोप लगाउन सिफारिस गरिँदैन ।
खोप लगाएको ३ देखि ६ हप्तामा मात्रै अर्को मात्रा लिनुपर्छ । दोस्रो मात्रा लगाएको ४ हप्तापछि शरीरमा एन्टिबडी बन्न थाल्छ । त्यो भन्दा पहिले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ । अन्यथा आफू र अरुलाईलाई सुरक्षित राख्न थप चुनौती देखिन पनि सक्छ । दोस्रो मात्राको खोप सोही कम्पनीको लगाउनुपर्छ जुन पहिलो मात्रामा लगाइएको छ ।
हाल बजारमा आएका खोपहरुको प्रभावकारिता, तिनका असर लगायतका बारेमा निक्र्यौल गरेरै भन्न नसकेपनि अनुमोदित सबै खोपहरु संक्रमणको विरुद्धमा ९० प्रतिशत माथि नै प्रभावकारी पाइएका छन् । जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो ।
खोपका असरहरु कसरी थाहा पाउने ?
सबैभन्दा पहिले त खोप लगाउँदा आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकसँग परामर्श गरेर उनीहरुकै प्रत्यक्ष निगरानीमा खोप लगाउनुपर्छ । तर खोप लगाइसकेपछि त्यसले आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य अनुकुल प्रतिक्रिया देखाउँछ कि विपरित भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
खोप लगाइसकेपछि स्वासप्रश्वास प्रणालीमा समस्यामा देखियो,जस्तै घाँटी अठ्याएजस्तो अनुभव हुनु, श्वास फेर्दा छोटो भएजस्तै वा घ्यारघ्यार हुनु, खोकी लाग्नु, वाकवाकी, वान्ता, पखाला तथा पेट दुख्नु, रिंगटा लाग्नु, बेहोश हुनु, मुटुको धड्कन तथा नाडी तीव्र गतिमा चल्नु, लगायतका नकारात्मक प्रतिक्रिया देखिन सक्छन् ।
कसैकसैलाई जीउभरि फोका उठी चिलाउने तथा ओठ र अनुहार एवं घाँटी सुन्निने पनि हुन सक्छ । यी यस्ता समस्या देखिएमा आफूले परामर्ष गरिरहेको चिकित्सकसँग सल्लाह दिने र नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गइहाल्नुपर्छ ।
तर, यहाँ बुझनैपर्ने कुरा के हो, भनेजसरी कोरोनाका लक्षण र प्रभाव मानिस अनुसार फरक फरक हुन्छ त्यसैगरि खोपको असर पनि फरक हुन सक्छ । कसैलाई खोपले गम्भीर खाले समस्या देखिन सक्छ त कसैलाई सामान्य । यद्यपी हालसम्म खोप लगाएपछि गम्भीर असर परेको घटना पाइएको भने छैन ।
विशेषतः खोप बजारमा ल्याई प्रयोगमा ल्याउनुपूर्व नै धेरै चरणमा क्लिनिकल परिक्षण गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा डराइहाल्नुपर्ने हुन्न । खोपका असर सामान्य देखिएका छन् जुन सामान्य हो । तसर्थ ढुक्क भएर खोप लगाउन सकिन्छ । तर खोप लगाइसकेपछि एन्टीबडी बन्न ४ सातासम्मको समय लाग्ने भएकाले सो अवधिभर भने स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रुपमा अपनाउनु पर्ने प्रेस संयोजक चिरन शर्माले बताए ।
कर्मचारीको लापरबाहीका कारण कोरोना पोजेटिभ व्यक्ति दिल्ली पुगे १४ घण्टा पहिले
काभ्रे कोरोना–सङ्क्रमणमुक्त हुँदै १६ घण्टा पहिले
कोलम्बियामा फेरि स्वास्थ्य सङ्कटकालको म्याद थपियाे १ दिन पहिले
ईयूमा कोरोना ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ चलाउन आग्रह १ दिन पहिले
भारतमा थपिए १६ हजार भन्दा बढी संक्रमित २ दिन पहिले
विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक बिरामी, विद्यालय बन्द ! ३ दिन पहिले
नेकपा विभाजनः अध्यादेश ल्याउने कि संसदमै सामाना गर्ने ? ४ घण्टा पहिले
आइपिओ नतिजा हेर्न सिडिएससीले ल्यायो नयाँ वेबसाइट ४ घण्टा पहिले
नेकपाको कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा बनेको छैन : कोइराला ४ घण्टा पहिले
देशभर ८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ४ घण्टा पहिले
कुटपिट गरी गर्भपतन गराएको आरोपमा तीन जना पक्राउ ४ घण्टा पहिले
देशको राजनीतिमा नैतिकपतनको प्रश्न पेचीलो बन्नु चिन्ताको विषय : जबरा ५ घण्टा पहिले
नेपाली राजनीतिमा धोकाधडी र षडयन्त्रको चलनः जसले ल्यायो उही सकियो १० घण्टा पहिले
विप्लव समूहका ३ जना कार्यकर्ता सप्तरीबाट नियन्त्रणमा १० घण्टा पहिले
ओली अरुको आलोचना सुन्न नसक्ने : प्रचण्ड १० घण्टा पहिले
राष्ट्रपतिबाट जोशीको स्वास्थ्यलाभको कामना ११ घण्टा पहिले
किशोरी विवाह गरेको अभियोगमा बेहुला र बुबा पक्राउ ११ घण्टा पहिले
आँखा अस्पताल नजिकै युवक मृत फेला ११ घण्टा पहिले
पाँचथरका सबै गाउँपालिकामा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन ११ घण्टा पहिले
विद्यालयमा आगलागी हुँदा एक करोडको क्षति १२ घण्टा पहिले
तपाईको आजको राशीफल कस्ताे छ ? १८ घण्टा पहिले
फागुन २९ गते स्याङ्जाली पत्रकारहरुकाे काठमाडौंमा बृहत भेला हुने १५ घण्टा पहिले
सर्वोच्चको फैसला स्वागत याेग्य कदम : सभापति देउवा ४ दिन पहिले
नेपाली समुदायलाई लक्षित गर्दै ‘ओला नमस्ते’ प्रकाशित ६ दिन पहिले
प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनका शहीदको स्मृतिमा पार्क निर्माण ७ दिन पहिले
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुने ६ दिन पहिले
शिक्षकले तलब नपाउँदा विद्यालयमा तालाबन्दी, पठनपाठन प्रभावित ३ दिन पहिले
अस्ट्रेलियामा कङ्गारूको १७ हजार वर्ष पुरानो चित्रकला ४ दिन पहिले
ओलीले बाेलाए राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकाे बैठक ५ दिन पहिले
नयाँदिल्लीस्थित इजरायली दूतावास नजिक बम विष्फोट ४ हप्ता पहिले
कोरोना खोप लगाएका ३३ जनाकाे स्वास्थ्यमा समस्या ४ हप्ता पहिले
निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरिने ५ दिन पहिले
अब इलाममा २७ नयाँ सिंँचाइ योजना बन्ने २ हप्ता पहिले
प्रदेश १ को तेस्रो वार्षिकोत्सव, समृद्धि र समुन्नतिको लक्ष्य हासिल २ हप्ता पहिले
बजेट अभावमा नाग्मा–गमगढी सडक ५ दिन पहिले
ओलीको निरंकुशता : तीन जना राखेर संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने २ महिना पहिले
‘निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी’बारे शिक्षामन्त्री नै अनभिज्ञ ! ९ महिना पहिले
क्यान्सर रोगीहरुलाई दिइँदै आएको एक लाख रुपैयाँ सहयोग रोकियो २ वर्ष पहिले
किसानलाई अलैँची टिप्ने चटारो ४ महिना पहिले